Miahy any Kildare izahay - IntoKildare
Fomba fanao tsara indrindra momba ny fizahantany sy fiarovana
Into Kildare Network dia nametraka hetsika tamina faritany antsoina hoe 'We Care in Kildare'. Ity fanoloran-tena ho an'ny mpitsidika antsika ity dia hiantoka fa misy ireto fepetra manaraka ireto mba hiarovana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny rehetra.
Mifanaraka amin'ny torolàlana Fáilte Irlandy nivoaka tamin'ny 8 Jona 2020, ny Into Kildare Network dia nametraka hetsika iray antsoina hoe 'We Care in Kildare'. Ity fanoloran-tena ho an'ny mpitsidika ity dia hametraka antoka fa misy ireto fepetra manaraka ireto mba hiarovana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mpitsidika sy ny sta rehetra ?. Izahay dia mitazona ny fenitra avo lenta azo antoka indrindra ka afaka manantena ny handray ireo vahiny izahay hahazo traikefa nahafinaritra sy miala sasatra tsy ho ela!
Fandaminana mialoha ny fitsidihanao
Fampahalalana ho an'ny mpitsidika amin'ny antsipiriany hita ao amin'ny intokildare.ie
Mihena ny fahafaha-miasa ahafahana manalavitra ny fiaraha-monina.
Famandrihana an-tserasera mialoha mba hisorohana ny vahoaka sy filaharana.
Toerana manokana ho an'ireo mpitsidika marefo raha azo atao.
Fanontana tsy mifandray amin'ny trano na tapakila finday ho an'ny manintona.
Fampiasana mialoha ny fandoavam-bola mialoha mba hisorohana ny filaharana.
Momba ny fahatongavan-tena
Naoty kely azo nidirana ho an'ny mpitsidika.
Isa voafetra miaraka amin'ny filaharana voafehy.
Manome toky sy mampiofana mpiasa mahay mandray olona.
Fitsipika avo indrindra momba ny fahasalamana sy ny fiarovana
Ny fikorianan'ny mpanjifa efa nomanina.
Famantaran-javatra manalavitra ny fizarana sosialy.
Fitondrana fanadiovana mandroso sy tsy miova.
Fanadiovana tanana na fanasana tanana.
Fifandraisana tsy mifandray amin'ny mpiasa
Toerana misy rivotra matetika.
Ekipa mendrika sy matoky tena
Voaofana tsara amin'ny fepetra fiarovana.
PPE ho an'ny mpiasa rehetra.
Fanamarinana ara-pahasalamana isan'andro.
Fanandramana mpanjifa 5 kintana
Traikefa azo antoka, raisina ary tsy hay hadinoina.
Tari-dalana sy fanatanterahana fanalavirana sosialy.
Fipetrahana mifanalavitra sy dabilio ivelany.
Fepetra fiarovana ara-tsakafo sahaza.
Mifandraisa mandra-pahatongan'ny isa sy ny fandoavam-bola.
Fanadiovana atao amin'ny fotoana maharitra.
Misoratra anarana amin'ny fandraisana andraikitra 'We Care in Kildare'
Ireo orinasa mampiseho ny afisy Kildare Fáilte dia nanao sonia fanambarana fa hanaraka ny teboka rehetra izy ireo raha toa ka mihatra amin'ny orinasany sy manaraka ny fitarihan'ny governemanta. Aorian'ny famaranana ny fanambarana etsy ambany, ireo orinasa mandray anjara dia hahazo sticker «We Care in Kildare» ary badge ho hita eo amin'ny toerana misy azy ireo, ary koa kopia niomerika ny afisy sy ny badge.